Apple mepee Applelọ Ahịa Apple ọhụrụ na China | Esi m mac
Ha gaa 34. Mgbasa Apple na mpaghara Asia niile Ọ bụ ihe mere ka ọ kwụsị ịtụ anyị n’anya n’oge dị anya gara aga. N’ókèala buru ibu dị ka China, ndị nọ na Cupertino chọrọ ịnwa iru ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ndị ahịa kwere omume site na imeghe ụlọ ahịa na mba ahụ dum. Ruo ugbu a, emepere ụlọ ahịa iri atọ na atọ, nke anyị mere ka anyị mara nke ọma.
Satọdee na-abịa, Machị 19, Apple ga-emeghe ụlọ ahịa nke 34 na mpaghara Asia. Storelọ ahịa Apple ọhụrụ a ga-adị na Dalian, obodo ọdụ ụgbọ mmiri dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke mpaghara Liaoning. Storelọ ahịa ọhụrụ a ga-adị na Olympia 66 ụlọ ahịa, nke dị n'okporo ụzọ Wusi nke mpaghara Xigang.
Oge awa nke ụlọ ahịa ọhụrụ a ga-abụ nke mbụ na Applelọ Ahịa Apple niile na mba ahụ, site na elekere iri nke ututu rue nke iri nke abali, ubochi nile nke afo. Ọnọdụ nke ọnụ ọgụgụ ahịa iPhone na nkeji iri na ise gara aga na asịrị na-aga n'ihu banyere mbelata nke ego nke ndị nrụpụta dị iche iche nke iPhone, na-egosi na ọ bụghị naanị na China, kamakwa n'ụwa niile ma ọ bụ ọkachasị iPhone, ọ nwere ike iru Oke ụlọ ọ nwere ike iru.
Ọ bụrụ na iPhone ahịa stagnate na China, ndị onye ahịa mbụ nke ngwaahịa ya karịa United States, Apple ga-aga ngwa ngwa iji mepee ahịa na India, ebe ọ na-elekwasị anya na mbọ ya na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, mana nke ruo ugbu a amịbeghị mkpụrụ. India, nke nwere ihe karịrị nde mmadụ 1.200, bụ isi ahịa na-emepe emepe ebe Apple chọrọ itinye isi ya dịka o mere na China, mana n'adịghị ka China, na India, ihe achọrọ iji nwee ike ịtọlite ​​ụlọ na-achọ karịa karịa China. China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple mepee Applelọ Ahịa Apple ọhụrụ na China
Snapheal, na ere ya obere oge na Mac App Store